Eoropa Andrefana - Howling Pixel
Ny tenenina hoe Eoropa Andrefana dia ireo firenena mikasika ny amorontsiraka Atlantika, ary noho izany ny firenena eo amin'ny faritra andrefan' Eoropa. Ny misy azy dia eo anelanelan'ny ranomasimbe Atlantika sy ny Eoropa Avaratra, ny Eoropa Atsimo, ny Eoropa Afovoany, mety ampidirina ao amin'ny faritany andrefana na atsinanana.
Amin'ny lafiny ara-tantara, ny Eoropa andrefana dia ireo nanana fifandraisana diplômatika tamin' Etazonia nandritry ny Ady Mangatsiaka, fa naitatra izy mba ho tafiditra ao ny firenena tsy mitongilana toy ny Soisa ; manomboka mifafa ilay sary tamin'ny fanitarana ny Vondrona Eoropeanina.
Ny faritan' Eoropa araka ny kaody statistikan'ny Firenena Mikambana : Eoropa Avaratra Eoropa Andrefana Eoropa Atsinanana Eoropa Atsimo
Ny abidy latina na abidy romana dia abidy ahitana litera fototra miisa 26 sady afaka atao sora-baventy na sora-madinika. Litera ao amin'ny abidy latina no mamorona ny abidy malagasy amin'izao fotoana izao. Mampiasa io abidy io hanoratany ny fiteniny ny ao Eoropa Andrefana sy Eoropa Avaratra ary Eoropa Afovoany. Mampiasa azy koa ireo firenena ivelan'i Eoropa indrindra ireo firenena nozanahin'ny Eoropeana, isan'izany ny ao Amerika Avaratra sy Atsimo sy ny ao Afrika ary ny ao Oseania. Ireto avy ny litera fototra ao amin'ny abidy latina amin'ny endriny soramadinika: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z. Tamin'ny taona 2002 dia ny 39%n'ny mponina maneran-tany no mampiasa ny abidy latina .
Ny Alemaina na Repoblika federalin'i Alemaina amin'ny fampiasana ofisialy, dia firenena ny Eoropa andrefana. Manana amorontsiraka amin'ny Ranomasina Avaratra ny Alemaina, mizara sisin-tany amin'i Danmarka, Polonia, Repoblika Tseky, Nederlandy, ny Belzika, Loksemborga, Frantsa, Soisa, ary Aotrisy.
Ny alemaina dia repoblika federaly, misy faritra 16 any (Bundesländer na oficial Länder amin'ny fiteny Alemana).
Tamin'ny andro taloha, ny Alemaina tahaka ny fantantsika amin'izao fotoana izao dia printsipaotia miisa mahery ny telonjato mizaka tena avokoa.
Tao amin'ny Empira Jermanika Masina ny Alemaina tamin'ny 962 hatramin'ny 1806, tao anatin'ny Konfederasiona Jermanika izy tamin'ny 1814 hatramin'ny 1866.
Tamin'ny nahafaranan'ny ady Frankô-jermanika tamin'ny 1871, Lasa zana-tany Prosy (jereo Prusse amin'ny teny frantsay) izy ary ny empira Prosy no nampiray an'i Alemaina tety aoriana : tamin'izany fotoana izany ny andron'ny Reich faha II na Reich Wilhelminiana.
Ny faharesen'ny Alemaina tamin'ny Ady Lehibe Voalohany tamin'ny 1918 dia nampilatsaka ny Reich Wilhelminiana ary nitondra ny fahatongavan'ny Repoblika tao Alemaina
Nanomboka ny Reich faha III tamin'ny taona 1933 faha nihongana ilay izy tamin'ny taona 1945, teo arinan'ny Ady Lehibe Faharoa.
Lasa petrahan'ny tafiky ny firenena nandresy azy ny Alemaina teo arinan'ny Ady Lehibe Faharoa, ary tamin'io fotoana io no nitranga ny RFA na Repoblika Federaly Alemana sy ny RDA na Repoblika Demokratika Alemana.
Nikambana ny RFA sy ny RDA tamin'ny taona 1990 (3 oktobra) tao aorian'ny nahalatsahanan'ny Rindrin'i Berlin. Berlin ny renivohiny nanomboka tamin'ny taona 1991 hatramin'izao.
82 tapitrisa no isam-ponina tamin'ny taona 2007, ary izy no firenena be mponina indrindra ao anatin'ny Vondrona Eoropeanina.
Ny Empira Jermanika Masina na Empira Romana Masina ny Firenena Jermanika (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation amin'ny teny Alemana, Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicæ amin'ny teny latina) dia firaisana ara-politika ny tany ny Eoropa Andrefana sy Ampivoany tamin'ny taona medievaly, ary etin'ny Mpitondra Romana Jermanika.
Tia hoe mpandovahàte hamaikanan'ny Empira Andrefana ny Karolinjiana nanjavina tamin'ny taonjato faha 10, ary tia koa izy hoe mpandovahâte hamaikana ny Empira Romana talohan'ny Empira Karolinjianina. Tamin'ny fitondran'i Barbarosa ny mpamaritra anarana Masina no nisy (1157).
Amban'ny dinastia ny Otonianina tamin'ny taonjato faha 10 ny Empira nanomboka nisy, avy amin'ny Fransia Atsinanana Karolinjianina. Ilay fitenenina Sacrum imperium nisy tamin'ny taona 1184, ary niasa foana tamin'ny 1254. Ilay fanampiny Deutscher Nation (Nationis Germanicæ amin'ny teny Latina) nipetraka tamin'ny taonjato faha 15. Ny fivelaran'ny faritan'ny Empira Masina nisolosolo foana tamin'ny taonjato manaraka tao, tamin'izy no nivelatra indrindra, ilay empira nivelatra amin'ny Eoropa Ampivoany sy Fariparitrin'ny Eoropa Antsimo
Ny Eoropa Afovoany dia faritan' Eoropa eo anelanelan'ny Eoropa Atsinanana sy ny Eoropa Andrefana. Ny tenenina hoe Eoropa Afovoany dia tsy ilay afovoany ara-jeografian' Eoropa fa ny afovoany ara-tantara.
Ireo firenena azo sokajiana ao amin'ny faritan' Eoropa Afovoany dia ny Alemaina, ny Aotrisy, ny Hongaria, ny Polonia, ny Repoblika Tseky, ny Silaovenia ary ny Krôasia.
Ny Kroasia sy ny Romania koa tsindraindray dia sokajiana ao main'ny firenen' Eoropa Afovoany, ny Krôasia dia ao amin'ny faritan'ny Balkana. Araka ny OTAN, ny Romania dia lazainy fa firenena ao amin'ny faritra atsinanan' Eoropa, na dia, nohon'ny antony ara-tantara sy ara-kolontsaina, sokajian'ny tantarata ho ao amin'ny faritan'ny Balkana aza izy ; ny faritra andrefana sy atsimon'i Romania izao dia mety ho ao amin'ny faritany afovoan' Eoropa, noho ireo faritany tao amin'ny Empira Aostrô-Hongariana tamin'ny andro taloha.
Ny Alzasy ny Laoraina koa dia ao amin'ny faritan' Eoropa Afovoany, raha jerena ny fianjadiana ara-kolontsaina sy ara-tantara (amin'ny lafin'ny fiteny, ny fomba sns.).
Ny Eoropa avaratra dia midika ny firenena any avaratr' Eoropa, manana ny kolontsaina ny ny fiteny skandinavy (Norvezy, Danemarka, Soeda sy Islandy) sy ny fiteny fennika (Finlandy sy Estonia). Amin'ny ankapobeny, ny Eoropa avaratra dia manonona ny ila avaratra an' Eoropa.
Fiangonana katolika tatsinanana
Ny Fiangonana katolika tatsinanana dia fitambaran'ireo fiangonana any Atsinanana izay miombona amin'i Papa ao Roma sy manaiky ny fahamboniany, nefa izy ireo manao ny fombam-pivavahana tatsinanana (kopta, siriaka tandrefana, maronita, siriaka tatsinanana, bizantina, armeniana ary gezy). Atao hoe "Fiangonana mizaka tena" na "Fiangonana manana ny lalànany manokana" (latina: sui iuris) izy ireo ao amin'ny voambolana katolika, nefa heverina fa Fiangonana katolika feno sahala amin'ny Fiangonana latina. Na dia samy tatsinanana aza dia tsy Fiangonana ortodoksa izy ireo. Atao hoe "Fiangonana oniata" na "Fiangonana grika katolika" na "Fiangonana katolika manaraka fomba bizantina" koa izy ireo. Raha ny lafiny fombafombam-pivavahana dia tsy mifanalavitra firy amin'ny fomban'ny Kristianisma ortodoksa an'ny Fiangonana katolika tatsinanana ka izy manaiky ny fahambonian'ny Papa ihany no tsy maha Ortodoksa azy ireo.
Isan'ny Fiangonana katolika tatsinana ny Fiangonana katlika maronita, kopta, armeniana, indiana, grika, eritreana ary etiopiana. Tsy any Atsinana sy ao Eoropa Atsinanana ihany no ahitana azy ireo fa nanaraka ireo am-pielezana ka misy any Amerika sy Oseania ary Eoropa Andrefana koa.
Fiangonana ortodoksa tatsinanana
Ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana na Fiangonana ortodoksa katolika izay fantatra indrindra amin'ny anarana fohy hoe Fiangonana ortodoksa dia fiangonana faharoa, raha ny hamaron'ny mpino ao aminy no jerena. Iray amin'ireo fiangonana tranainy indrindra izy. Fiombonam-piangonana ortodoksa maromaro izay samy niorina araka ny Kosily fito nifandimby izay atao hoe "Fiangonan'ny konsily fito" izy. Ny ankamaroan'ny Fiangonana ortodoksa tatsinanana dia hita ao Eoropa Andrefana sy ao Grisia (na Gresy) ary ao Kaokazy. Ahitana mpivavaka ortodoksa koa ny tapany atsinanan'i Mediteranea sy ao Afrika. Vitsy dia vitsy ny mpino ortodoksa any Atsinanana Afovoany noho ny fisian'ny fanenjehana. Amin'izao fotoana izao dia miisa 250 000 000 any ho any ny mpino ortodoksa maneran-tany.
Ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana dia ny vatana mpampihatra ao amin'ny Firenena Mikambana. Nofaritana ho manana andraikitra amin'ny fitazomana ny fandriam-pahalemana ary ny filaminana iraisam-pirenena izy io araky ny Dinan'ny Firenena Mikambana ary manana fahefana manokana toy ny fitazomana ny fandriampahalemana, ny fametrahana sazy iraisam-pirenena ary ny fanomezan-dalàna hanafika.
I Galia na Gaola dia faritra tao Eoropa Andrefana nonenan'ny vahoaka seltika sy vahoaka akitaniana, izay mahafaoka an'i Frantsa, i Luxembourg, i Balzika ny ampahany lehibe amin'i Soisa, ny tapany avaratr'i Italia ary faritra maro amin'i Holandy ary amin'i Alemaina: ny lemaka andrefan'ny renirano Rhin. Mahatratra eo amin'ny 494 000 km2 eo ny velarany.
Ny Magreba, na Maghreb (amin'ny teny arabo al-Maghrib, amin'ny teny berbera Tamazgha) dia faritany any Afrika Avaratra eo anelanelan'ny ranomasina Mediteranea, ny Sahara ary ny ranomasimbe Atlantika.
Ny mpanjanatany arabo voalohany tonga teo amin'io faritany io dia nanonona io faritany io Jazirat al-Maghrib. Ankehitriny. Ny Magreba dia mivondrona ny Tonizia, ny Aljeria ary ny Maroka. Ankehitriny, mba tsy hifangaro, lazaina hoe Magreba kely ny na Magreba Anivo ny firenena telo mala ny saikanosy atlasianina any Afrika Avaratra. Ao amin'ny Magreba Be dia misy ny Maoritania, ny Sahara Andrefana ary ny Libia.
Ny velarantanin'ny Magreba dia 5 tapitrisa kilometatra efa-mira voazara eo anelanelan'ny dobo Mediteraneanina sy ny faritany Saharianina. Ny tanimatin'i Sahara dia maka ny ankabeazan'ny Magreba. Ny isam-ponina ao Magreba dia misy 73 tapitrisa mponina, eo amin'ny amorontsiraka, be latsakorana kokoa, ny ankabeazan'ireo 73 tapitrisa ireo. Betsaka ny harena an-kibon'ny tany toy ny fôsfaty sy vy ary ara-angôvy (etona sy solitany).
Ny Magreba dia mandritry ny arivo taona mahery vondrona ara-jeôgrafia, fa tsy ara-piteny (betsaka n fiteny ao : ny fiteny arabo sy berbera). Samihafa amin'ny sisan'ny tontolo arabo sy afrikanina izy noho ny fahasamihafana ny fiavian'ny mponiny ary noho izany, ny kolontsainy. Na dia mifanalavitra aza ny Maghreb sy ny Machrek, ny teny arabo sy maha-silamo no mamatotra ireo tontolo roa irao. Ny tantarany ankehitriny dia voakasiky ny fanjanatany frantsay, italianina, espaniola ary italianina. Ny Eoropa Andrefana koa manana fianjadiana eo amin'ny Magreba, ary mbola betsaka nohon'ny fianjadian' Eoropa any Atsinanan'i Mediteranea ny fianjadiany eo Magreba.
Ny neo-ortodoksia na teolojia dialektika dia firehana ara-teolojia ao amin'ny protestantisma izay nandroso taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Mampiavaka azy ny fanoherana ny fampianaran'ny teolojia liberaly tamin'ny taonjato faha-19 sy ny fanamafisana ny fahefan'ny fampianaran'ny Reformasiona izay nihalefy hery nanomboka tamin'ny taonjato faha-18, indrindra tao Eoropa Andrefana. Ny teolojian'ny pastora soisa roa lahy Karl Barth sy i Heinrich Emil Brunner no santionan'izany teolojia neo-ortodoksa izany. Tsy azoazon'izy ireo anefa ny iantsoana azy hoe "neo-ortodoksa" satria tsipahiny ny foto-pampianarana momba ny fandraisana ara-bakiteny ny Baiboly, izay antsoina indraindray hoe "ortodoksia". Ao Etazonia dia i Karl Paul Reinhold Niebuhr no nitarika ny neo-ortodoksia.
Ny Ranomasina Mediteranea dia ranomasina any atsimo andrefan'i Eorazia, ary ranomasina any avaratr'i Afrika. Ny halavany avy any andrefana hatrany atsinanana dia misy 4 000 km kilometatra, ary 1 800 km ny halalany.
Ny ranomasina Mediteranea dia manasaraka ny kontinenta Afrikanina sy ny kontinenta Eoropeanina. Ny andilan-tanin'i Suez fotsiny ny tany ifandraisan'i Afrika sy ny kontinenta Eorazianina. Ny andilan-drfanomasin'i Gibraltar dia manasaraka an'i Espaina sy i Afrika Avaratra, 14 kilometatra monja ny halaviran'i Afrika avaratra sy i Eoropa Andrefana.
Ny anarana Mediteranea dia midika "ranomasina eo anivon'ny tany", na mare medi tera amin'ny teny latina (araka an'i Isidora avy any Sevila tamin'ny taonjaoto faha 7).
Nandritra ny Andro Taloha, ny ranomasina Mediteranea dia lalan'ny sambo sy lalan'ny entan-barotra, ahafahan'ny fifandraisana ara-barotra sy ara-kolontsaina eo amin'ny mponina mipetraka manodidina an'i Mediteranea - ny kolontsain'i Mezôpôtamia, i Ejipta, ny kolontsaina semitika, persana, fenisianina, kartajinianina, grika ary romana. Ny tantaran'i Mediteranea dia zava-dehibe amin'ny fiaviana sy ny fivoaran'ny haifomba any Andrefana.
Ny tarehin-tsoratra latina na dia tarehin-tsoratra avy amin'ny abidy latina. Litera ao amin'ny tarehin-tsoratra latina no mamorona ny abidy malagasy amin'izao fotoana izao. Mampiasa ireo tarehin-tsoratra ireo hamoronany ny abidiny ny fiteniny ny ao Eoropa Andrefana sy Eoropa Avaratra ary Eoropa Afovoany. Mampiasa azy koa ireo firenena ivelan'i Eoropa indrindra ireo firenena nozanahin'ny Eoropeana, isan'izany ny ao Amerika Avaratra sy Atsimo sy ny ao Afrika ary ny ao Oseania. Ireto avy ny litera fototra ao amin'ny vondron-tarehin-tsoratra latina amin'ny endriny soramadinika: a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o - p - q - r - s - t - u - v - w - x - y - z. Tamin'ny taona 2002 dia ny 39%n'ny mponina maneran-tany no mampiasa ny tarehin-tsoratra latina .